Madaxda Somaliya oo garowsaday inaanan la boobi karin doorashada | Universal Somali TV
Madaxda Somaliya oo garowsaday inaanan la boobi karin doorashada
Madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa si degdeg ah u bilaabi doono Doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka.
Guddiyada Doorashada Dowlad Goboleedyada ayaa lagu wadaa in maalmaha ina soo aadan ay bilaabaan Doorashada Golaha Shacabka, iyadoo markaasi la ilaalinayo waqtiga lagu ballamay in lagu soo geba-gabeeyo doorashadaasi.
Madaxda Golaha Wadatashiga Qaran ayaa ku heshiiyay in Doorashada Golaha Shacabka la soo geba-gabeeyo 25-ka bisha soo socoto ee February.
Sabtida berrito ayaa lagu wadaa in Muqdisho lagu doorto Gudoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal, sida uu iclaamiyay Gudoomiyaha Guddiga Qaban-qaabada, Axmed Aadan Dagaal (Safiina).
Golaha Shacabka oo ka kooban 275 xubnood waxaa la fahamsan yahay in illaa iyo hadda la soo doortay 34 xubnood oo keliya, kuwaa oo lagu kala doortay Magaalooyinka Dhuusamareeb, Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo.
Marka aad eegto habraacyada doorashada ee laga soo saaray shirkii 9-kii January lagu soo geba-gabeeyay Caasimadda Muqdisho waxay kuraasta harsan ee Golaha Shacabka ka dhigi doontaa in si hufan loogu tartamo, taa oo hoos u dhiggi karta amaba meesha ka saari karta in kuraastaasi la boobo.
Dadka odoroso siyaasadda dalka ayaa kuu sheegaya in meelaha qaarkood ay wax is daba marin ka dhici karto, balse ay xaaladdu ka adkaan doonto, sidii hore.
Fallanqeeye-yaashu waxay sheegayaan in habraacyadii ugu dambeeyay ee lagu heshiiyay ay dhammaan musharaxiinta u suurtagelinayso inay helaan shahaadada musharaxtinimadooda Golaha Shacabka, iyadoona la tixgelin doono cabashooyinka guud.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Xafiiska Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Madaxda Dowlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo la fahamsan yahay in xiriir dhow ay leeyihiin, uu dhinacyadaasi ugu yeeray inay ka fogaadaan in kuraastu uu buuq xoog lihi hareeyo.
Bishii December, Ra'iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa Madaxda Dowlad Goboleedyada u sheegay inaanan la aqbali karin in doorashada la musuq maasuqo. Rooble ayaa xalka keliya ee maanta la haysto ku tilmaamay doorasho xor iyo xalaal ah oo dalka ka qabsoomta.
Rooble oo Khamiistii shalay-na ka hadlayay Shirka Golaha Wasiirada ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadu ay ka go'an in doorashadu ku dhammaato, xilligii lagu heshiiyay.
Mareykanka ayaa Arbacadii ku hanjabay in xayiraado dhanka socdaalka ahi lagu soo roggi doono cid kasta oo caqabad ku noqota hufnaanta doorashada.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Ned Price ayaa sheegay in Mareykanku uu qaadi doono tallaabooyinka lagama maarmaanka ah, haddii mar kale doorashadu dib uga dhacdo waqtigii lagu heshiiyay.
"Mareykanku waxa uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah, oo ay ka mid tahay xanibaado dhanka fiisaha ah, taasi oo jawaab u ah, haddii doorashada ay dib u dhacdo ama ay dhacaan tallaabooyin lagu wiiqayo hufnaanta geeddi-socodka." Ayuu yiri Ned Price.
Prof. Xasan Sheekh Cali oo Cilmiga Siyaasadda ka dhigga Jaamacadda Muqdisho ayaa hanjabaadda ka soo yeertay Xukuumadda Washington ku tilmaamay farriintii ugu dambeysay ee loo jeediyo Madaxda Qaranka.
"Hadalkani wuxuu u dhigmaa in Dowladda Mareykanka ay u soo dirtay Somaliya farriintii ugu cusleyd ee diblomaasiyadeed. Tani oo ka dhigan in hoggaankii hore ee Somaliya loola hadlayo, sidii ugu dambeysay." Ayuu yiri Prof. Xasan Sheekh Cali oo VOA la hadlay.
Buuqa hareeyay doorashadan ayaa ka dhigeysa middii ugu liidatay ee dalka ka qabsoomta, marka aad dib u milicsato labadii xilli doorasho ee ugu dambeysay ee Somaliya laga qabtay.
Kan-xigaWararkii ugu dambeeyay Guddiga Dooras...
Kan-horeSafiirka Mareykanka ee Somaliya oo bo...
64,701,251 unique visits